unogwaja usondeza i-pellet,kanjani ukwenza pellets feed onogwaja
Indlela eyisisekelo yokwenza onogwaja onogwaja
Izidingo ezisezingeni eliphansi zomvundla wokudla kokulungiswa yile 14% imicu engagundeki, 2% amanoni, namaprotheni aluhlaza 12%. Qiniseka ukuthi okuphakelayo ozokhiqiza okungenani ukuhlangana noma okungcono okwamanje, yeqa inani elingezansi le-fiber, kepha gcina amaprotheni kanye namafutha emazinga aphansi.
Izinga le-Fibre le 15% ukuze 17% kwanele. Ileveli enkulu kune 17% igcina ukuzuza kwesisindo okungaba yifiselekayo kunogwaja wesilwane ongathathi hlangothi namazinga we-fiber we 22.5% futhi phezulu kusetshenziselwa ukunciphisa ukukhuluphala nama-hairballs.
Amazinga wamaprotheni kufanele abe 15% ukuze 19%. Qiniseka ukuthi izinga le-fiber likhulu kuneleveli yamaprotheni. Amaprotheni amaningi kakhulu ekudleni adala inani elikhulu le-ammonia kumchamo. Kungaba ngcono ukugcina amaprotheni eduzane 15%.
Amazinga wamafutha kufanele abe aphansi, nxazonke 3% noma ngaphansi. Ukuphakama kokuqukethwe kwamafutha pellet kuba kubi kakhulu kune-bunny yakho, ngoba kungadala ukukhuluphala. Gwema ama-pellets amaningi amantongomane, imbewu, njll. kuwo, akukuhle ukuzondla ngenxa yokuqukethwe okunamafutha amaningi.
Njengoba sazi umshini nokwakheka kokwenza amarabi anogwaja, unganqikazi ukwenza okuthile. Onogwaja bazozijabulisa ngempela
Amathiphu Ngokuphakela Ngokudla Okuphathelene Nogwaja
Lapho usunqumile ukuthi hlobo luni lwama-pellets owathengayo, sicela uqinisekise ukuthi ngaso sonke isikhathi usebenzisa uhlobo olufanayo nhlobo lwamaphayile. Amanye onogwaja abenzi kahle ekushintsheni okungazelelwe kokuphakelayo futhi kungadala izinkinga zokugaya. Uma kufanele ushintshe kufanele uhlanganise okuphakelayo okudala nokuphakelayo okusha ukuze uthole umgudu wokugaya onogwaja osetshenziselwa okuphakelayo okusha. Qiniseka ukuthi unele kokuphakelayo okudala ukuze ushintshe kancane uye kokuphakelayo okusha. Kwenze lokhu kancane kancane isikhathi esingangeviki elilodwa. Uma kwenzeka, ungathenga nje iMoney Flat Die feed Pellet Mill okuyiyo elula isakhiwo, ukumbozwa kwendawo encane, ukusetshenziswa okungabizi futhi okuphansi ukukhiqiza ama-pellets akho wokuphakela unogwaja ukugwema ushintsho.
Gcina ama-pellets esitsheni esivaliwe endaweni epholile, indawo eyomile. Ngale ndlela ama-pellets ayovikelwa ekungcoleni, ukukhanya kwelanga, kumnyama. Zama ukugcina isivalo sivaliwe futhi lokhu kuzokwehlisa ithuba lamagciwane.
Ungahlanganisi okusanhlamvu nembewu nge-pellets yokudla konogwaja, njengoba unogwaja azokhetha izinto azithandayo bese eshiya okusele, okusho ukuthi kuzobe kungakutholi ukudla okunempilo. Musa ngaphezulu ukondla unogwaja wakho. Ukukhuluphala onogwaja kungadala isikhathi esifushane sokuphila. Ubukhulu be 1/8 inkomishi ngayinye 1.8 kg isisindo somzimba we-pellet fiber ephezulu ngosuku ilungile. Ukuze onogwaja abakhula abasha, pellets zinganikezwa ukukhetha mahhala kuze kube 6 ukuze 8 izinyanga zeminyaka, bese wehla uye kwisamba sokulungiswa njengoba ngaphezulu.
Izinzuzo Zamaphilisi Okuphakelwa Kokukhulisa Amarabi
Okokuqala, ukulunga okuhle. Ngesikhathi pelletizing, kunenqubo ebizwa ngokuthi yi-starch pasting, okuletha ukunambitheka okumnandi kwe ama-pellets okondla futhi wandise ukubukeka okuhle kwama-pellets ukuvuselela isifiso sokudla sonogwaja. Ngenxa yalokho, ukudliwa kokudla konogwaja kungakhula 10%-15%.
Okwesibili, ukuqina kwepellets. Ama-pellets rigidity we-feed akhuphuka kakhulu uma kuqhathaniswa ne-wet-mixing powder feed, ezilungele kakhulu onogwaja ukuzijabulisa okujabulisayo ukugaya amazinyo abo ngezinto ezinzima.
Okwesithathu, kungavimba ngempumelelo onogwaja kusuka ekudleni okunesifo sesifo sikashukela okubangelwa kukhetha ngokudla.
Okwesine, thuthukisa isilinganiso sokugaya ukudla, futhi ilungele ukugaya esiswini nokuxovulwa konogwaja.
Okwesihlanu, inzalo kanye nokubulala amagciwane, futhi kunciphise ukusakazeka kwezifo. Okuphakelayo kwePellet, emva kokushisa kwesikhashana okufushane kuze kufike 70 ℃ -100 ℃ kwinqubo yokucindezela, ingabulala ingxenye yamaqanda athambile kanye nama-pathogenic ezincane, okwenza isifo se-rabi sincishiswe kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kuyadingeka ukomisa ama-feed pellets ngesikhathi ukuze uvikele ukungaboli.
Ngaphezu kwalokho, Ukusetshenziswa kwama-pellets okuphakela kunganciphisa imfucuza yokuphakelayo futhi lokhu kungonga imali kubagcinisi.